साउदी अरबमा अबदे’खि खुला भयो यी कुरा, के अरु देश जस्तै खुल्लाा भएको हो ? – List Khabar
Home / समाचार / साउदी अरबमा अबदे’खि खुला भयो यी कुरा, के अरु देश जस्तै खुल्लाा भएको हो ?
साउदी अरबमा अबदे’खि खुला भयो यी कुरा, के अरु देश जस्तै खुल्लाा भएको हो ?
साउदी अरबमा पहिलो पटक महिला फुटबल लिग सञ्चा’लन हुने भएको छ। यस म’हिनाको अन्तिममा साउदीमा पहिलो पटक महिला फुटबल लिग सञ्चालन हुन लागेको हो। साउदी फुटबल फेडेरेसन (महासंघ)का अनुसार लामो समयपछि साउदीले महिला खेलकुदको लागि अवसरको ढोका खोलेको छ। प्रतियो’गिता नोभेम्बर २२ देखि सञ्चालन हुने छ।
रुढीवादी साउदी अरेबियामा लामो समयदेखि महिला खेलकुदमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गरी नयाँ महिला फुटबल लिग दुई चरणमा हुने साउदी फुटबल महासंघले जनाएको छ। महा’संघका अनुसार १६ वटा समूहले पहिलो चरणको खेलमा भाग लिनेछन्। पहिलो चरणको खेल राज’धानी रियाद, जेदाह र दाम्मा’ममा हुने छ।
अन्य समाचार : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुल’मान घिसिङले आइतबार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको निरीक्षण गर्दै घिसिङले तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष अगावै आयो’जनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“महत्वपूर्ण दातृ निकायको सहभागिता रहेको आयोजना तोकिएकै समयभि’त्र सम्पन्न गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ,” घिसिङले भन्नुभयो । सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
घिसिङले बाँधको निर्माणकार्य ढिलाइ भएको उल्ले’ख गर्दै यसलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक किरण श्रेष्ठले आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । आयोजनाले तीन वटै प्याकेजका का’मलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
प्याकेज १ अन्तर्गत नदी फर्काउने, बाँध निर्माणलगायतका कामका लागि तयारी थालिएको छ । उक्त कामका लागि आयोजनाले सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपा’ल जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्सर) निर्माण कार्यका लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डि राभेना, इटालीसँग विसं २०७५ असोज १५ मा सम्पन्न खरिद सम्झौता रद्द भएपछि कम्पनी’ले विसं २०७६ वैशाख १२ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकाले सबै बोलपत्र अस्वीकृत गरी एशियाली विकास बैंकको खरिद नि’र्देशिका अनुरुप विसं २०७६ फागुन १६ गते दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरे’को थियो ।
आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले प्याकेज १ अन्तर्गतको कामका लागि मोबाइल क्रसर प्लाण्ट निर्माण, खोला क्रसिङ गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्याकेज २ अन्तर्गत सिनो हाइड्रोले भूमिगत काम गरिरहेको छ । जसअनुसार हाल पाँच ठाउँमा काम भइरहेको छ । आयोजना प्रमु’ख घिमिरेका अनुसार पाव’रहाउस, वर्क टनेल, सर्च ट्याङ्क लगायतका काम भइरहेको छ । प्याकेज ३ अन्तर्गतको प्रशारण लाइन निर्माणको कामले पनि ‘तीव्रता पाए’को छ ।
Previous बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टा आमा बनेकी छन् । ४६ वर्षीया प्रीतिले सरोगेसीको माध्यमबाट जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् ।
Next किन ४० वर्ष कटेपछि विवाहेत्तर स’म्बन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ?